'प्रोपोज डे' २०१८: जानिराखौ, केटीलाई प्रेम प्रस्ताव गर्ने दमदार ४ तरिका!
‘प्रोपोज डे’ २०१८: जानिराखौ, केटीलाई प्रेम प्रस्ताव गर्ने दमदार ४ तरिका!
काठमाडौँ: – भ्यालेन्टाइन वीक हिजोबाट नै सुरु भईसकेको छ। जसले गर्दा हरेक युगल जोडीहरु आफ्नो अलग-अलग तयारीमा लागिपरेका छन्। कसरी आफ्नो पार्टनरलाई प्रेम प्रस्ताव गरेर विशेष महसुस गराउने भनेर ‘रोज डे’ पछि अब ‘प्रोपोज डे’ बारे तनाव रहेको छ। । यति मात्र होईन आज हामीलाई एक आश्चर्यचकित कुराको जानकारी मिलेको छ।
त्यो हो नेपालभरि अधिकांस युवाहरुले ईन्टरनेटमा केटीलाई कसरी प्रोपोज गर्ने सर्च गरेका छन् र भारतमा पनि धेरै युवाहरुले ईन्टरनेटमा उही कुराको सर्च गरेका छन्। केटीहरुलाई प्रस्ताव गर्ने अनेकौं तरिकाहरु छन्, तर यदि तपाई यसबारे दुविधामा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यस समस्याबाट हामी मुक्त गर्नेछौं।
उनलाई प्रेम प्रस्ताव गर्न एक भिडियो तयार गर्नुहोस। यस भिडियोमा आफ्नो दिलको सम्पूर्ण कुराहरु राम्रो र खुलस्त रुपले राख्नुहोस र उक्त भिडियोलाई युट्युबमा पोस्ट गर्नुहोस। यसपछि उक्त भिडियोलाई एक सीरियल मेलको साथ पठाउनुहोस्। जब उनले तपाईको उक्त भिडियो हेर्नेछिन, तब उनको प्रतिक्रिया कस्तो रहनेछ। एकचोटी केबल कल्पना गर्नुहोस त। एक कुरा याद गर्नुहोस कि भिडियोमा आफ्नो मनको कुराहरु एकदम क्रियटिभ तरिकाले राख्नु पर्नेछ । तपाईको यो प्रपोजले तपाईको प्रेमिकाको दिल अवश्य छुनेछ र तपाईको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार्नेछिन।
सबैभन्दा पहिले एक अडियो रेकर्ड गर्नुहोस जसमा तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ, “वेक अप हर्शिता, अंकित लभ यू” । अब तपाईले जुनसुकै एक तरिकाबाट उक्त अडियोलाई तपाईको प्रेमिकाको मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्नुहोस र उक्त अडियोलाई अलार्म सेट गर्नुहोस। तपाई दुई बजेको अलार्म सेट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यो त्यस्तो समय हो जुनबेला मानिसहरु गहिरो निन्द्रामा हुन्छ। तपाईको पार्टनर निश्चित रुपमा खुशी हुनेछ।
टी शर्ट प्रपोज:
यस विधिले तपाईलाई आफ्नो प्रेमिकालाई प्रेम प्रस्ताव गरेर उनको मन जित्न अधिक मद्दत गर्नेछ। एउटा सेतो टी-शर्ट लिनुहोस् र त्यसमा तपाईहरु दुवैको फोटो या आफ्नो मनको कुरा प्रिन्ट गर्नुहोस। अब यो टी-शर्ट ज्याकेट भित्र लगाएर घरबाट निस्कनुहोस। हरेक दिन जस्तै तपाईहरु कहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहीं जानुहोस र उनलाई एक्लै पाउन कोसिस गर्नुहोस। त्यसपछि एक प्रिय मुस्कानका साथ आफ्नो ज्याकेट खोलेर उनको सामुन्ने उभिनुहोस।
केक, चकलेट वा उनको मनपर्ने चिजमा रिङ्ग लुकाएर दिनुहोस:
तपाई आफ्नो प्रेमिकालाई केक या चकलेटमा रिङ्ग लुकाएर गिफ्ट दिन पनि सक्नुहुन्छ। यसका साथै उनको लागि एक प्रिय म्यासेज लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रोपोज गर्ने तरिका र उक्त ठाउँ तपाईको पार्टनरले जिन्दगीभर कहिल्यै भुल्ने छैन।
प्रकाशित : बिहिबार, माघ २५, २०७४१२:३४
६५ वर्षमा कति मिच्यो भारतले नेपाली भूमि ? काठमाण्डौंलाई किन दुख्दैन देशको पिडा ?
मान्छेकाे अावाज नक्कल गर्ने व्हेल
पाथिभराकै प्यारा भए मन्त्री रबीन्द्र अधिकारी ! यस्तो थियो उनको राजनीतिक र निजी विगत !